I-Fest St. Martin - yendabuko kwaye isesesikhathini
USt Martin - Inkcubeko kunye nosuku
Ukuthuthela eSt. Martin
Amanye amasiko anxulumene noSt. Martin
Umthendeleko weSt. Martin of Tours uza kuba kwi-11. Ikhunjulwe ngoNovemba kwaye ikwahluke ngokungafaniyo kwimimandla emininzi. Nangona kunjalo, ibali likaSt. Martin kunye nesenzo esidumileyo-ukwabelana ngengubo-yonke indawo.
11. Ngenye indlela, uNovemba yayikhunjulwe kuba yayingumhla wokubanjwa kukaMartine. Kwakukho ngonyaka we-397 kwaye ukususela ngaloo mini usubhiyozelwa kwi-Yurophu Ephakathi kunye nokwenza ngokuhlukileyo ngokuxhomekeke kummandla.
Izibani zokukhanya zeLuminous Saint Martin
Ukuba ubala, lo mhla ubuye malunga neentsuku ze-40 ngaphambi kweKrisimesi kwaye ngoko ke ukuqala kweLente, njengoko kwenziwa eNkathini Ephakathi, ngakumbi kwiCawa leOthodoki.
Ngokufana neyokuqala kweLente kwiSibini ngoLwesibili, uSt. Martin wawanika abantu ithuba lokutya ngokucokisekileyo nangentlonelo, phambi kweentsuku ezilandelayo ze-40 ziphela nje ukutya okuncinci okanye kungabi nantoni.
KwiRhineland yi11. NgoNovemba kwakhona ukuqala kwexesha lezemidlalo. Ukongezelela, iintlawulo zahlawulwa ngaloo mini, zidla ngohlobo nangama-geese. Izilwanyana zaza kufuneka zondliwe ngebusika, ngoko isitokisi sagqitywa ngale ndlela kwaye kuhlawulwe ityala elifanayo.
11. NgoNovemba, nangona kunjalo, kwakunomhla oqhelekileyo apho ulwalamano lwengqesho luphelile okanye luqaliswe kwakhona, apho ukuqeshiswa okanye ukubala kwamanani aphelile kwaye waqala kwakhona. Usuku lweMartini luhlala lusexesha lokuqala nokuphela kwimiba yezoqoqosho kwaye ngoko ke kwathiwa ngumdla wentsuku.
Isithethe sokutya isidumbu sikaMartin sinokucaciswa ngale ndlela, kodwa nayo ingummiselo uxelela malunga nokuxhamla kunye nabaMartinsgans. UMartin wayeza kutyunjwa ngu-bhishop, engayifuni kwaye ayifihle. Amajezi axoxile athengisa indawo yakhe yokucasha kwaye ngaloo ndlela wenza ukuba akwazi ukuhlanjululwa. Kodwa kukho namanye amabali malunga nesidlo somdlo wesigodi, eJamani i-goose isetyenzwa kwiindawo ezininzi ezinomdaka kunye neklabishi ebomvu.
Iingoma ze-Saint Martin kunye namanqaku kunye nombhalo kwifomu efanelekileyo yomntwana kunye namaphepha omculo okombala
Kubantwana, ukunyuka kwe-St Martin kuyimbangela yokubhiyozela ngezizathu ezahlukeneyo. Ukufudukela okunjalo kwenzeka emazweni amaninzi aseYurophu, nangona iinkcukacha ezincinci zingahluka kwiindawo. Zonke ziyafana, nangona kunjalo, umqhubi kunye nezibane okanye iibani kwiindawo zokuhlala. Iibane zithengwa okanye zithinjwa ngabantwana bentanga kunye nabantwana besikolo ngokwabo.
Iimfesane nazo zenzeke kwiidolophana ezincinci, i-kindergarten yangasese ingaba ne-parade yayo, eyenzekayo ngosuku oluthile kunokuba ukuhamba kwabafundi besikolo sendawo. Ngoko kwenzeka ukuba kwezinye iiparadesi ezimbini okanye kathathu kwi-stade yaStart Martin ibonakala. Ukuba akukho abenzi ngokwaneleyo kwiSt. Martin, kodwa iyaluswa kwaye isitimente senzeke kanye kuphela.
Kule nkqubo, abantu bahamba kunye neSt Martin. Oku kuhamba ngokuxhomekeka kwimbutho yendoda yeRoma. Abathathi-nxaxheba bahlabelela uMartinslieder kwaye bahamba kunye namaqela. Ekupheleni komlambo, umlilo waseMartin, olungiselelwe phantsi kweliso oluqinileyo, ulindele umlilo, otshabalalayo xa kufika amalungu ololiwe.
Sankt Martin - Iingoma zeParade kunye noSt. Martin-Ffeuer
Umdlali waseSt. Martin uzakuthi ngamagama ambalwa kubathathi-nxaxheba besitimela, mhlawumbi ukukhumbula ibali lomceli kunye nesahluko seengubo. Kwiindawo ezininzi, le mifanekiso ibuye iphindwe kwakhona.
Emva koko, abantwana abahamba kunye nesitimela bafumana enye Weckmann, Stutenkerl okanye Martin goose ezenziwe ngedlava emnandi, eyahlukileyo kuxhomekeke kummandla.
Iyona nto ihamba phambili kwiSt. Martin i-Worms-Hochheim, e-Kempen kwi-Rhine ephantsi ne-Bocholt. Ezi zithuthi zibala ngokukhawuleza kubaxhamli be-6.000. Kubantwana, uMthendeleko weSt. Martin ungomnye wemikhosi ebaluleke kakhulu ekwindla.
Bajonge phambili kwangoko kwaye banomdla wokwenza izibane. Ngokuqinisekileyo, abantwana abancinci banokufumana inkxaso yabazali babo, kodwa akudingeki ukuba baphelele. Ngokuqinisekileyo kukho ukucula ngexesha lokucwangcisa, kukho icocoa eshushu kunye nama-bhisikidi kwaye ngexesha lokufunda ngezandla zingakwazi ukuvula okanye ukuphefumula ngaphandle, kungumnandi nje ngaphakathi.
Ngokuqinisekileyo, abantwana besikolo esikhulileyo benza itotshi ngexesha leklasi esikolweni. Ngaphambili, kwakuyinto yesiko ukudweba ubuso be-sugar beet grimacing kunye nokusebenzisa i-turnip njengotshani.
Ukongezelela ukwabelana ngeengubo kwaye udle iiMartinsgans eziseSt Martin nazo ezinye izithethe. I-Martinssingen ayiqhubekanga kuphela ngexesha lokuhamba, kodwa nangemva koko okanye ngomhla othe ngqo.
Kwimihlaba emininzi, abantwana bahamba ngendlu ngendlu kunye nezibane zabo emva kokuhamba, bahlabelele ingoma ye-Martini kumntu ovula umnyango kwaye bacele izipho ezincinci. Ezi zeekerkese ziqhamo, iziqhamo okanye ezinye izifo.
Ngaphantsi kwegama uMartinisingen umkhuba omdala ugcinwa kwiindawo zamaProtestanti e-East Frisia. Nangona kunjalo, ubhekisela kuMartin Luther, ogama lakhe lingumhla kwi11. Novemba u bhiyozelwa. Emazantsi eJamani kwimimandla yamaProtestanti yile belsnickel Ulindele ukuzisa izipho kwintsuku yaseSt Martin kwaye ngamanye amaxesha Nussmärtel okt.
Ingoma kaMoya kaMartin - amanqaku kunye nombhalo
Umbala weMart Martin
Umbala wekhasi le-Saint Martin Lanterns Moving
Umbala weMar Martin / Martinstag
Umcimbi womcimbi wokuzalwa wabantwana kunye neminye imibhiyozo
Umbala weMbali uMartin